असार मसान्तसम्म वित्तीय बजार कस्तो रहला ? - Karobar National Economic Daily
असार मसान्तसम्म वित्तीय बजार कस्तो रहला ?
query_builderJune 14, 2017 9:24 AM supervisor_accountसुरजविक्रम राणा visibility289
नेपालको वित्तीय परिवेश अरू देशको भन्दा निकै फरक छ । छिमेकी मुलुक भारत, चीन र भुटानभन्दा पृथक् वित्तीय धरातल बोकेको हाम्रो देशमा प्रचुर वित्तीय क्रियाकलाप मौलाएको छ ।
नेपालमा पहिलो बैंकका रूपमा १९९४ सालमा नेपाल बैंक खुले पनि २०१३ सालमा नेपाल राष्ट्र बैंकको उदय भयो र सोही समयदेखि नेपाल राष्ट्र बैंकले नेपालमा केन्द्रीय बैंकको भूमिका सबल तवरले सम्पादन गरेको विश्लेषण गर्न सकिन्छ । राजनैतिक परिवर्तन र देशको अर्थव्यवस्थालाई सम्बोधन गर्दै केन्द्रीय बैंकले समयसापेक्ष हुने गरी धेरै आर्थिक प्रयोग गरेको पनि पाइन्छ । तर, पछिल्लो समय बैंक तथा वित्तीय बजारमा उदाएका भिन्न–भिन्न समस्याहरूले हाल वित्तीय क्षेत्र तरङ्गित बनेको छ ।
मोडर्न बैंकिङको चर्चा चलिरहँदा नेपालका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले वासल थ्रीको मोडल सञ्चालन गरे पनि कोषको लागतमा लगानी गर्नुपर्दा पुरानै परिपाटीलाई निरन्तरता दिएको देखिन्छ । राज्यबाट पनि पेपरलेस कर्जाको अवधारणा अघि सार्नुपर्ने आजको आवश्यकता हो ।
जेनरल बैंकिङमार्फत धितोस्वरूप घरजग्गा, गाडी, सेयर प्रमाणपत्र, सुनचाँदी, मेसिनरी, मौज्दात, वक्यौता रकम र जमानत आदिको सुरक्षणमा कर्जा लगानी कुनै नौलो कुरा रहेन ।
अतः विदेशी बैंकहरूसरह नेपाली बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले पनि छिटो–छरितो र झन्झटमुक्त कर्जा प्रवाहको वातावरण सिर्जना गर्नुपर्छ । यस प्रक्रियामा केन्द्रीय बैंकले सही परिपत्र जारी गर्नैपर्ने आजको आवश्यकता हो । तर, नेपालको समग्र आर्थिक परिवेश हचुवा र अड्कलबाजीमा निर्भर छ । सेयर बजारको उतारचढाव र सर्किट बे्रकरको अवस्था यसै गरी सबल राजनीतिक मोडको पर्खाइजस्ता कारक तŒवले नेपाली बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू सदैव अन्योलमा देखिन्छन् ।
देशको गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) र उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (कन्जुमर प्राइस इन्डेक्स) मा भएको सुधारका कारण नै देशमा कर्जाको अनुपात बढेको पाइयो । औसत मुद्रास्फीति गएको वर्ष ७.२ प्रतिशत थियो भने हाल सो ५ प्रतिशतमा समायोजन भएको छ ।
ब्याजदर सकारात्मक भएको अवस्थामा मुद्रास्फीतिको प्रतिशत निक्षेपको ब्याजभन्दा बढी हुने गर्छ, जसले अर्थतन्त्रमा सकारात्मक भूमिका सिर्जना गर्छ । यसै गरी विश्व अर्थतन्त्रलाई केलाएर हेर्दा आर्थिक वृद्धिदर ३.५ प्रतिशतमा रहेको छ भने हाम्रो देशको आर्थिक वृद्धिदर ६.५० प्रतिशतमा रहने अनुमान गरिएको छ, जसले गर्दा आषाढ मसान्तसम्ममा देशमा पछिल्लो वर्षको भन्दा राम्रै आर्थिक कार्यहरू हुने प्रमाणित हुन्छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको प्रगति विवरणमा निष्क्रिय कर्जाको मौलिक स्थान रहेको हुन्छ । निष्क्रिय कर्जाको अनुपात बढेमा वित्तीय संस्थाको नाफा घट्ने र सो अनुपात घटेमा नाफा बढ्ने भएकाले पनि लगानी र बचतकर्ताहरू सजग भई बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको छनोट गरिरहेका हुन्छन् । पछिल्लो मसान्तको विवरण हेर्दा २८ अर्बको निष्क्रिय कर्जा देखिएको छ, जुन कुल कर्जाको १.७० प्रतिशत हो ।
अतः आर्थिक वर्ष समाप्त हुँदासम्ममा निष्क्रिय कर्जाको अनुपात कस्तो रहला भन्ने कौतूहलता सबैको चासोको विषय भएको छ । तरलताको पीडामा मलम लगाउन बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमाझ हाल प्रचुर निक्षेप सङ्कलनतर्फ होडबाजी चलेको छ । आकर्षक ब्याज पस्केर निक्षेप सङ्कलन गर्नु आजभोलि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको दिनचर्या भएको सहजै विश्लेषण गर्न सकिन्छ ।
देशमा पछिल्लो समय राजस्व संकलनमा अतुलनीय वृद्धि भए पनि सोको तुलनामा सरकारी खर्च भने अपेक्षित रूपमा बढ्न सकेन । यसले गर्दा सरकारको ढुकुटीमा उल्लेख्य नगद मौज्दात संकलन हुन पुग्यो ।
त्यसैगरी विप्रेषण आप्रवाहको वृद्धिदर कम हुनुका साथै आयातसमेत बढेकाले कृत्रिम तरलताको तगारो बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा देखियो । फलतः उच्च निक्षेपको होडबाजी वित्तीय बजारमा मौलाएको छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट हाल संकलित निक्षेपलाई न्यून रूपमा समेटेर हेर्दा निम्न विवरणहरू पाइयो ः
निक्षेपका किसिम २०७२ (चैत मसान्त) २०७३ (चैत मसान्त) कैफियत
चल्ती ९.४ प्रतिशत ७.५० प्रतिशत १.९० प्रतिशतले घटेको
बचत ४२.८ प्रतिशत ३६.६० प्रतिशत ६.२० प्रतिशतले घटेकोे
मुद्दती २८.६० प्रतिशत ४०.६० प्रतिशत १२ प्रतिशतले बढेको
कल १८.४० प्रतिशत १४.४० प्रतिशत ४ प्रतिशतले घटेकोे
मार्जिन ०.९० प्रतिशत ०.८० प्रतिशत ०.१० प्रतिशतले घटेकोे
माथि साभार गरिएका सूचकहरूले मुद्दती निक्षेपबाहेक अरू सबै प्रकारका निक्षेपहरूमा घटेको प्रतिफल देखाएको छ । यसले गर्दा हाल बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको बचत खातालाई मात्र प्रभाव नपारी सम्पूर्ण वासलातमा नै प्रभाव परेको छ ।
वित्तीय क्षेत्र सबल रहन मुनाफाको ठूलो भूमिका रहेको हुन्छ र बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको भविष्य पनि यसैमा निहित हुन्छ । अतः राज्यका तर्फबाट पनि समुन्नत लगानीको अवसर बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई दिनुपर्छ, जसबाट बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले उचित लाभांश वितरण गर्न सकून् । चैत मसान्तसम्ममा वाणिज्य बैंकहरूको मुनाफा रु. ३०.७३ अर्बमा रहेको थियो भने सो मुनाफा आषाढ मसान्तमा रु. ४१ अर्बमा रहने अनुमान गर्न सकिन्छ ।
वित्तीय क्षेत्रले काँचुली फेर्दै छ । सबल र समुन्नत वित्तीय बजारको कल्पना अब साकार हुने जस्तो देखिँदै छ । सीमित संख्यामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू रहनु, वित्तीय संस्थाहरूको वर्गअनुरूप चुक्ता पुँजीको विभाजन र वासल थ्री अनुरूप जोखिमको भारजस्ता कार्यले वित्तीय क्षेत्रलाई नवीन आयाम दिनेछ । यसले निक्षेपकर्ता, लगानीकर्ता र कर्मचारीको हकहित सुरक्षित रहने देखिन्छ ।
असन्तुलित र अप्रतिस्पर्धी बन्दै गएको वित्तीय बजारले भोलिका दिनमा समुन्नत र सरल आर्थिक कार्य गर्ने वातावरण नेपाल र नेपाली जनताले पक्कै दिनेछ ।
बैंक जीडीपी वित्तीय परिवेश